Soraty Fa Date My Pet
Join ny ekipa lehibe mpandray anjara.
Manaiky hatrany izahay lahatsoratra lehibe avy amin'ny mpanoratra, mpamaham-bolongana sy ny mahaleotena mpanoratra. Fa hevitra ny zavatra mitady, Vakio ny alalan 'ny lahatsoratra sasany ao amin'ny habaka. Izany dia hanome anao koa ny hevitra ny feo sy ny karazana lahatsoratra izay efa niasa tsara ho an'ny mpihaino.
Misy vaovao ankapobeny:
Ny fanapahan-kevitra amin'ny boky lahatsoratra Mifototra amin'ny fahamendrehana sy ny suitability ny lahatsoratra tsirairay isam-batan'olona.
Raha manaiky ny hamoahana ny lahatsoratra voalohany, dia taratasy ny fifanarahana ho fandoavam-bola nanao sonia alohan'ny atao any am-amin'izao fotoana izao ho an'ny tsirairay ny tahan'ny lahatsoratra. Tsy ho izany fifanarahana izany fandraisana anjara manaraka ho namoaka. Rehetra anjara manaraka ny boky dia mifototra amin'ny fahamendrehana sy ny suitability ny lahatsoratra tsirairay isam-batan'olona.
Ny kendrena dia US mpanatrika ny 18 tokan-tena.
Madinika ankoatra ny tranga miavaka, Tokony ho eo lahatsoratra 600-1000 teny.
Anaram-boninahitra ny votoaty izay efa niara-niasa tsara ireo teny mahery, isa (ohatra lisitra) sy fanontaniana.
Ny fandefasana lahatsoratra rehetra tany am-boalohany, ary TSY MAINTSY ho tsy navoaka teo anatrehan'i.
Mpanoratra Mety hifidy ny ho matoatoa mpanoratra na manana ny mombamomba navoaka tao amin'ny tranonkala.
Ny hanaiky ny fandinihana lahatsoratra, mailaka azafady ny lahatsoratra ho:
manaiky AT datemypet.com
FANAMARIHANA: Fandraisana anjara avy amin'ny fandraharahana ara-barotra ny fahafahana misafidy, na dia heverina ho tsy mandray karama amin'ny fototra